नेपाली स्याट–१ ले असार २ देखि पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने – Clickmandu
क्लिकमान्डु २०७६ जेठ २७ गते १६:२४ मा प्रकाशित
जाक्साले सो भूउपग्रह निर्माणका लागि नमूना तयार गरी सफल बनाएको नाष्टका प्रवक्ता सुरेशकुमार ढुङ्गेलले बताए । सो प्रविधि सुरक्षित रहन पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणबाट जोगिनुपर्ने हुन्छ । यस भूउपग्रहको आयु तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्मको हुनेछ । सरकारले नेपालमा सन २०१७ देखि उक्त भूउपग्रह निर्माणको योजना अघि बढाएको हो ।
एप्पलले सार्वजनिक गर्यो आइओएस १३, के छन नयाँ विशेषता, कसरी डाउनलोड गर्ने ?
इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ ? अब यस्ता पोष्ट गर्न र हेर्न पाइँदैन
फेसबुकले थप्यो नयाँ भिडियो टुल्स, फेसबुक लाइटबाट पनि लाइभ गर्न पाइने
अजेयराज सुमार्गीको टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय सर्बोच्चद्धारा सदर